Vokatry ny haino aman-jery sosialy eo amin'ny traikefan'ny mpanjifa | Martech Zone
Raha vao niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny haino aman-jery sosialy ny orinasa, dia natao ho sehatra hivarotana ny vokatra sy hampitombo ny varotra. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, na izany aza, ny media sosialy dia niditra an-tsokosoko ho amin'ny tambajotra ankafizin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera - toerana hifaneraserana amin'ireo marika ankafizin'izy ireo, ary ny tena zava-dehibe dia ny mangataka fanampiana rehefa manana olana izy ireo.
Betsaka ny mpanjifa no mitady hifandray amin'ny marika amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary tsy ho afaka hifaninana ny orinasanao raha tsy miditra ianao. Ny fifandraisan'ny rehetra sy ny tsy firaharahiany ny mpanjifa dia tsy safidy tsotra izao - hanana izany ny voka-dratsy ateraky ny traikefan'ny mpanjifa, ary avy eo, mandratra ny faran'ny farany ambany.
Fantatrao ve ny antony itiavan'ny mpanjifa ny media sosialy? Manome azy ireo fahaizana hametraka fanontaniana sy hamela ny heviny ao amin'ny forum ho an'ny daholobe izay hiseho ny valinteninao mba ho hitan'ny rehetra - ary minoa ahy ianao, mijery ny mpanjifa hafa. A fianarana avy amin'ny Conversocial dia nahita fa ny 88% -n'ny mpanjifa dia tsy dia mividy amin'ny marika iray izay tsy nisy valiny ny fitarainan'ny mpanjifa tao amin'ny media sosialy. Amin'ny ankapobeny, ny fomba fifandraisanao amin'ny mpanjifanao dia dinihin'ireo mety ho mpividy.
Ny mpanjifa ankehitriny dia zatra mandray valiny eo noho eo. Rehefa mametraka fanontaniana amin'ny media sosialy ny mpanjifa dia manantena izy ireo fa hiverina aminy haingana miaraka amin'ny vahaolana. Raha ny tena izy, 42% ny mpanjifa manantena valiny ao anatin'ny adiny iray, miaraka amin'ny 32% fanampiny manantena izany fotoana izany ao anatin'ny 30 minitra. Raha tsorina dia tokony apetaho amin'ny pulsa ny rantsan-tànanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny kaonty media sosialy hahitanao ny hevitr'izy ireo sy ny fanontaniana rehefa miditra izy ireo.
Raha mahita ny marikao ianao ao anatin'ny krizy amin'ny haino aman-jery sosialy, dia mila manana an'io olana io ianao ary manome vahaolana haingana. Raha tsy afaka manome vahaolana eo noho eo ianao (na ny mpiasanao) dia alao antoka fa miasa ny azy ny mpanjifa ary manara-maso raha vantany vao manana valiny ianao. Ny zavatra farany tianao hatao dia ny fanamby ny faharetan'ny mpanjifanao amin'ny alalàn'ny tsy firaharahiany tanteraka azy ireo— izay mety hisy vokany mampidi-doza.
Fanatrarana lehibe kokoa
Andro vitsy alohan'ny media sosialy dia mety mizara traikefa mividy ratsy amin'ny olona vitsivitsy amin'ny fianakaviana, namana akaiky ary mpiara-miasa ny mpanjifa. Ho an'ny orinasa, isa voafehy hiatrehana izany. Na eo aza izany, miaraka amin'ny Facebook sy Twitter, ny mpanjifa tezitra dia manana olona toa tsy manam-petra toa azy amin'ny famoahana tantara momba ny serivisy mpanjifa mahatsiravina sy ireo vokatra tsy mahasalama.
Ny antontan'isa manodidina an'io fisehoan-javatra vaovao io dia tsy tokony hanina fotsiny:
45% ny mpanjifa mizara traikefa ratsy amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny media sosialy (Fikarohana dimensional )
71% amin'ireo mpanjifa miaina valiny marika haingana sy mahomby amin'ny tambajotra sosialy dia mety hanolotra izany marika izany amin'ny hafa, raha oharina amin'ny 19% fotsiny amin'ireo mpanjifa izay tsy mahazo valiny. (NM Mandroritra)
88% ny olona matoky ny hevitra an-tserasera nosoratan'ny mpanjifa hafa toa ny fatokisany ny tolo-kevitra avy amin'ny fifandraisana manokana. (BrightLocal)
Rehefa miditra sy mamaly ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny media sosialy ny orinasa, dia mandany 20% ka hatramin'ny 40% bebe kokoa amin'ireo orinasa ireo mpanjifa ireo. (Bain & Company)
85% amin'ireo mpankafy marika ao amin'ny Facebook no manolotra ireo marika ireo amin'ny hafa (Syncapse)
Ireo mpanjifa dia 71% kokoa no mety hividy raha mifototra amin'ny referansa media sosialy (Hubspot)
Ny mpanjifanao dia manana lavitra sy mitaona bebe kokoa noho ny teo aloha, ary tombontsoa ho an'ny orinasanao ny mampifaly azy ireo amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny media sosialy haingana sy matetika araka izay tratra.
Ny mikasika ny olombelona
Azonao atao tsara ny manatsara ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana eo amin'ny fantsona media sosialy. Matetika ny mpanjifanao dia mifototra amin'ny fihetseham-po fa tsy lojika - ary tsy misy mahasolo ny fifandraisan'olombelona amin'ny fampitana fifandraisana ara-pientanam-po.
Azonao atao ny manangana fifandraisana ara-pientanam-po ary mahazo tombony amin'ny fifaninananao amin'ny alàlan'ny fahazoana antoka fa fantatry ny mpanjifanao fa hita sy ankafizina izy ireo.
Valio avy hatrany ireo hafany.
Manomeza tanana sy misaotra ny olona tsirairay rehefa maneho hevitra na mizara ny hafatrao izy ireo.
Mandefasa fisaorana amin'ny tambajotra sosialy rehefa mividy izy ireo.
Manolora fihenam-bidy amin'ny entana tiany.
Araka ny filazan'ny Market Force, manasongadina ny traikefan'ny mpanjifa dia miteraka taham-pahalianana avo lenta ary 2-12 heny ny naoty avo lenta - izay samy misy fiatraikany lehibe amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy ny vola miditra. Rehefa mampiasa ny haino aman-jery sosialy araka ny tokony ho izy ianao dia hisy fiatraikany azo antoka tsy misy isalasalana amin'ny traikefan'ny mpanjifa izany - ary iza no mahalala, dia mety hiafara amin'ny famadihana ireo mpanjifanao faly ho mpisolo vava marika ianao.
Tags: serivisy ho an'ny mpanjifa ratsyBainbrightlocalmpiray finoanafitadiavana mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifampanjifa fanohananafikarohana dimensionalfihetseham-pompiasahubspotmikasika ny olombelonainteractive interactivetsenamandrisikalevitra fanapahan-kevitratongahaino aman-jery sosialyfanahin'ny marikafanohananazendesk
100 taona aty aoriana: Ny fanjakan'ny mpisoratra anarana
Dec 21, 2016 amin'ny 9: 55 AM
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny orinasa ny fampiasana azy hampitombo ny fivezivezena amin'ny tranokalanao. Tsy vitan'ny hoe manampy anao hitarika ny olona mankany amin'ny tranokalanao ny haino aman-jery sosialy, fa arakaraky ny hizaranao ny habaky ny haino aman-jery sosialy no hampitomboana ny laharan'ny fikarohana anao.
Dec 21, 2016 ao amin'ny 1: PM PM
Tsy mivantana fa marina izany… saingy efa nilaza i Google teo aloha fa tsy mampiasa fizarana ara-tsosialy mivantana hamaritana ny laharana. Tsy mivantana, ny fizarana ny votoatinao ara-tsosialy matetika dia mahatonga ny olon-kafa hizara sy hiresaka momba izany. Rehefa mahita ny lalan'ireo tranonkala mifandraika ireo rohy mifandraika ireo dia manampy amin'ny filaharana izany.